PAOK Oo Shaacisay Sababtii Uu Xalay Madaxweynaheeda Garoonka Ula Soo Galay Bistoolada » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ Falanqeynta/PAOK Oo Shaacisay Sababtii Uu Xalay Madaxweynaheeda Garoonka Ula Soo Galay Bistoolada
Kooxda kubada cagta PAOK Salonika, ee ka dhisan wadanka Gariiga, ayaa waxay warbixin ay kasoo saartay dhacdadii layaabka badneed taasoo uu sameeyay ninka Madaxweynaha, laguna magacaabo Ivan Savvidis.
Ficilka uu sameeyay Madaxweyne Ivan Savvidis, ayaa waxay tahay in iyadoo ay ciyaartu socoto uu garoonka soo galay, isagoo sawiro laga soo qaaday ay muujinayeen inuu xiran yahay Bistoolad.
Inuu Madaxweynaha garoonka soo galo ayaa ka dambeysay kadib markii kooxdiisa laga diiday gool daqiiqadii 89aad, taasoo lagu sheegay inay ahayd Garab-dhaaf, laakiin gadaal laga ansixiyay.
PAOK Salonika, ayaa waxay ku sheegtay dhaqanka uu sameeyay Ivan Savvidis, mid lagama maar-maan u ahaa inuu daafaco kooxdiisa, iyadoona umuuqatay kooxda mid daafacaysay talaabada uu Milkiilaheeda uu qaaday.
“Kadib wixii dhacay Toumba Stadium, Madaxweynaha PAOK FC, Ivan Savvidis wuxuu isku diyaarinayaa inuu qaado dhamaan talaabooyinka lagama maarmaanka ah si uu u ilaaliyo kooxda,” ayaa lagu yiri war saxaafadeedka.
Waxaa intaas lagu daray: “Talaabooyin iyo waxyaabo kale oo badan waxaa lagu dhawaaqi doonaa saacadaha soo socda.
PAOK, ayaa kaalinta 3aad kaga jirta qeybta ugu sareysa ee horyaalka wadanka Gariiga waxaana ay labo dhibcood ay ka sareyn lahayd dhigooda hogaamiyeyaasha ah ee AEK, hadii ay kulankii xalay badin lahaayeen.
Bishii hore, kulankii ay PAOK la dheeshay dhigeeda Olympiacos ayaa waxaa la joojiyay ciyaarta ka hor inta aan la baasan, kadib markii Tababaraha Olympiacos ninka lagu magacaabo Oscar Garcia, shaqin lagu soo tuuray.
Geesta kale, xiriirka kubada cagta aduunka ee FIFA, oo sheekadaan si kulul uga hadlay ayaa waxaa uu ku tilmaamay dhaqan xun, wuxuuna sheegay in xukunka uu udeynayo xiriirka kubada cagta wadanka Gariiga
Ugu dambeyn, xubin ka tirsan Golaha Wasiirka, ee wadanka Gariiga oo sidoo kale arrintaan wax ka yiri ayaa wuxuu ku tilmaamay mid ka baxsan calaamadaha kubada cagta, isagoona ku baaqay in go’aan cad laga soo saaro.
Ivan Savvidis PAOK Salonika
Madaxweynaha Sevilla Oo Fariin Digniin Ah U Diray Man Utd Ka Hor Kulanka Lugta 2aad Ee UCL